I-Hanok Private House Water Pool Villa :: I-Villa Eau
Okcheon-dong, Suncheon, South Jeolla Province, i-South Korea
Indawo yonke ibungazwe ngu-렛스테이
I-'Villa Eau', lapho ungezwa khona umuzwa wendawo yokungcebeleka e-Suncheon, iyindawo engavamile futhi ekhangayo eyenza uzizwe sengathi ukwelinye izwe.
Njengoba igama elithi 'Villao' liphakamisa, kukhona ichibi lokubhukuda elizungezwe izihlahla zesundu, ukuze ukwazi ukujabulela ukudlala emanzini ngasese futhi uphulukiswe! Silungisa amanzi ashisayo ukuze ujabulele ukufudumala noma kubanda ♥
Amanzi ashisayo ahlinzekwa futhi akukho zindleko ezengeziwe.
Sizolungisa amanzi ashisayo lapho ungena, ngakho-ke sicela usitshele isikhathi sakho sokungena kusenesikhathi! (Izinga lokushisa lamanzi ashisayo ashiswe kanye alinakekelwa.)
Amaqabunga nezinambuzane zingandizela ku-swimming pool yangaphandle.
*Inothi elikhethekile: Indawo ezungeze ichibi iyashelela kakhulu. Ikakhulukazi izingane ezincane, sicela uzinakekele ngokukhethekile futhi uziqondise ngabazali bazo!! (Akukho diving, akukho ukugijima)
Njengedamu lokubhukuda labadala, izingane zidinga ukunakwa okukhethekile kubazali bazo.
Asinacala ngezingozi ezidalwe ubudedengu ngenxa yesimo sendawo yokuhlala engafanele.
* Ukuphakama kwamanzi echibi cishe ngama-90cm
-Ukudla: Vula umsindo futhi ujabulele ikhofi noma itiye. Ngalungisa nezincwadi ezimbalwa.
-Igumbi lokulala: Lala embhedeni othambile wasehhotela (umbhede we-Simmons queen size) ujabulele imuvi noma ividiyo ene-beam projector
-Igumbi lokugezela: Indlu yokugezela eluhlaza enikeza umuzwa okhethekile. Yehlisa ukukhathala kwakho kubhavu olungiselelwe kahle
-Indawo yangaphandle: Ichibi lapho ungajabulela khona amanzi ahlanzekile nsuku zonke ngamanzi ampompi ahlanzekile. Isikhathi sokuphumula uhlezi eduze kwetafula elingaphandle (Idamu lokubhukuda lishintshwa ngamanzi ahlanzekile nsuku zonke. Amanzi ayisivivi ngenkathi efika) / Usayizi wechibi: 2700*4300)
Itholakala phakathi nohambo lwemizuzu emi-3 ukusuka eSeomun Information Center emaphakathi "Culture Street" kanye nohambo lwemizuzu emi-5 ukusuka "Sooncheonhyanggyo", lapho ungabona khona iJungang-dong, Haengjae, neJeon-dong, ziwumgogodla wephrojekthi ye-Suncheon yokuvuselela idolobha.
Hlola ezinye izinketho ezise- Okcheon-dong, Suncheon namaphethelo